Ny firehetampon’i Mariam Abuadas hanome tanjaka ny media ao amin’ny faritra MENA · Global Voices teny Malagasy
Mpitantana ny GV arabo maniry " handray anjara mavitrika amin'ny fangaraharàna sy ny fisoloan-tena"
Voadika ny 06 Janoary 2021 12:27 GMT
Sary natolotr'i Mariam Abuadas ary nahazoana alàlana
Fanamarihana avy amin'ny bilaogin'ny vondrompiarahamonina: Hamerina indray ny andiany vaovao amin'ireo lahatsoratra antsoina hoe “GVer-n'ny herinandro” ity lahatsoratra ity izay, isaky ny Alarobia, hanasongadinantsika mpikambana iray hafa notendren'ireo mpiaramiasa aminy ato anatin'ny vondrompiarahamonina. Raha toa ianao maniry ny hanendry olona ho asongadina etoana, iangaviana hameno ato.
Avy any Jordana sy Espaina, efa ela i Mariam Abuadas no nahafantatra momba ny Global Voices fony tamin'ny fotoana naha-mpikambana azy tao anatin'ny tambajotra midadasika misy antsika. Vao tamin'ny 2019 naha-mpandray anjara mavitrika azy tao anatin'ireo ekipa Global Voices amin'ny fiteny Arabo any amin'ny faritra “Middle East and North Africa (MENA)” – Afovoany Atsinanana sy Afrika Avaratra, noho ny fandrisihan'ny Mpitantana ny Lingua ato amin'ny GV. Ao anatin'ity antsafa tamin'ny alàlan'ny imailaka ity, no izaràn'i Mariam misimisy kokoa momba ny fahalinany, ny manosika azy, ary itariny bebe kokoa mankamin'ny antony iheverany fa mitàna toerana lehibe manokana ao amin'ny faritra MENA ny GV.
Global Voices: Ivelan'ny GV, manao inona ianao? Inona ireo zavatra hafa mahaliana anao?
Vao haingana aho no nifindra nankao Kanadà, ary nandritra ireo volana vitsy lasa, ny fiainam-pianakaviako no nifantohako. Amin'ny fanampiana ireo zanako handia mora kokoa ny tetezamita sy hifandrindra amin'ilay fiainana, toerana ary ny andavanandro vaovaon-dry zareo. Ketrehiko ihany koa ny tetikasa iray izay mibahana be ny fotoanako tato ho ato, momba ny media vaovao, iarahako amin'ny namako, Naseem Tarawnah.
GV: Inona no zavatra iray mahagaga ho anao?
Mahaliana ahy fatratra ny fiantraikan'ny teknôlôjia amin'ireo fiarahamonina arabo, indrindra indrindra, ary ny anjara toerana tànan'ny fiteny ao anatin'izay fihetsehana izay. Ohatra, nandritra ireo taona roa farany, tena difotra tanteraka tao anatin'ny teknôlôjia Blockchain aho, sy ny vahaolana mety azony omena hamahàna ireo fanamby isankarazany ao amin'ny faritra MENA. Vao haingana aho no nanampy tamin'ny famoahana torolalana teknika iray amin'ny fiteny arabo satria mino aho fa azo porofoina ny maha-ilain'ny tanora arabo azy io mba hahafahany mahazo torohay / vaovao momba ireo teknôlôjia vao mipongatra, toy ny Blockchain, amin'ny fiteny arabo.
GV: Inona momba ny toerana onenanao no tianao ho fantatry ny olona ?
Mbola vaovao aho any Kanadà, ary ny hoe hamantatra azy io nandritra ny fotoanan'ny valanaretina namely izao tontolo izao dia tena sarotra. Fa hatreto, ny tena nahagaga ahy fotsiny dia ny fahasamihafana sy ny filaminan'ny fiarahamonina kanadiàna amin'ny ankapobeny. Hafa ny mandre olona mitantara azy, ary tena hafa ny hoe milona ao anaty toerana iray izay ifanaretsahan'ireo fiaviana marobe tsy misy toa azy.
GV: Toy ny ahoana no nahitanao ny GV sy nanombohanao ho isan'ny mpandray anjara?
Isan'ny tao anatin'ny faribolana GV aho hatramin'ny tena niandohany satria nitàna anjara toerana lehibe izy tamin'ny fampiakarana ireo feo avy amin'ny tontolon'ny bilaogy tao MENA. Tamin'ny 2019, lasa tena nahaliana ahy ny hevitra hoe handray anjara amin'ny fomba miabo sy mahomby amin'ny fangaraharàna sy ny fisoloana tena ao anatin'ny media ao amin'ilay faritra, ary dia nifandray tamin'i Mohamed Gohari aho hiresahana izay fomba azoko atao handraisako anjara amin'ny asan'ny GV.
GV: Nahoana no heverinao ho zavadehibe ny GV?
Mitàna anjara toerana goavana ny GV amin'ny fanomezana sehatra iray ho an'ireo feo tsy miankina avy any amin'ny faritra mba ho ren'ireo tontolo izao.
GV: Fomba ahoana no nanovàn'ny GV ny fomba fijerinao ny tontolo?
Traikefa iray tena nampisokatra ny maso ny naha-mpandray anjara GV ahy nandritra ny fotoanan'ny valanaretina COVID-19. Tany am-piandohana dia sorisorena ihany aho noho ny tena tsy fisian'ny torohay momba ilay viriosy mivoaka avy any amin'ny faritra MENA, ka araka izany dia nifantohako ny asa niarahana tamin'ny ekipa Lingua mba hanaparitahana araka izay tratra amin'ny fiteny arabo ireo votoaty mahasoa mba hanairana ny sain'ny olona. Io asa io dia nanampy nampibaribary tamiko ny hantsana lalina amin'ny resaka torohay / vaovao teny anivon'ny vahoaka, na tao anatin'ireo vondrompiarahamonina miteny arabo izany, na nanerana izao tontolo izao.
Araho ao amin'ny Twitter amin'ny @mariamadas i Mariam.
7 ora izayAmerika Avaratra